Kismaayo News » Yuusuf Qeybdiid, Seeyga gabadhii xaamilada ahayd ee la kufsaday, lana diley
Yuusuf Qeybdiid, Seeyga gabadhii xaamilada ahayd ee la kufsaday, lana diley
Kn: Waxaa waraysi bixiyey seeyga haweeneey Soomaali ah oo dhawaan inta la kufsaday, kadibna ceejo lagu diley.
Yuusuf Qeybdiid C/raxmaan oo gabadha ay isku cusbaayeen, gabadhuna ahayd ugub, markaasi ilmihii ugu horeysey uur lahayd ayaa sheegey in markii uu falka dhacayay uu ku maqnaa meel meherad ah oo uu ku lahaa tuulada Humansdorp ee gobolka Eastern Cape, iyada oo gabadha ay wehel u ahaayeen gabdho kale oo laakiin nasiib daro habeenkaasi aanan la jiifsanin.
Gabadha la diley oo qoyskeeda ku dhaqanyihiin magaalada Qabridahare ee gobolka Soomaalida, ayaa lagu magacaabi jirey Nasro Maxamed Qamaan, waxayna dilkeeda caro weyn galisey Soomaalida ku dhaqan Port Elisaberth ee koonfur Afrika kuwaasoo Police-ka la dagaalamay markii gabadha meydkeeda laga heley gurigeeda subaxnimadii sabtida.
Maxamed suufi oo isagu ah qaraabada gabadha ayaa falka dhacay ku tilmaamay foolxumo iyada oo kale aanan la arkin.
Wararka la helayo waxa ay sheegayaan in la tuhunsanyahay kooxo daroogiisteyaal ah oo K/Afrika u dhashay oo guriga daris kula ahaa qoyska, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in guriga gabadha ay deganeyd ninkii lahaa uu horey xoog oga saaray qoys bixin waayay kirada guriga.
Gabar Soomaaliyeed oo ahayd tii ugu horeysay oo dul istaagta meydka ayay saakay Police-ku waraysanayaan, iyadoo arrintani ay soo jiidatay dareenka dowladda gobolka Eastern Cape ee Koonfur Afrika.
Marxuumadda, Nasro Maxamuud Qamaan ayaa la sheegay inuu awoowe u ahaa Gabayaagii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Qamaan Bulxan.